Calgary waa kan ugu weyn labada magaalo ee waaweyn ee Alberta, kan kalena waa Edmonton. Magaaladu waxay leedahay dad ah 1.239,220, magaaladuna ay ku jirto xaafadaheeda waxaa ku nool dad gaaraya 1,392,609.
Calgary caan waa caan u ah Calgary Stampede Rodeo. Munaasabada waxaa la qabtaa July kasta. Calgary waxaa loo yaqaan 'Stampede City' sababtoo ah tan.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Calgary&oldid=173373"
Last edited on 27 Maarso 2018, at 10:37
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 27 Maarso 2018, marka ee eheed 10:37.